‘को त्यो लोकमान ? आज पनि हाँस्दैथ्यो, अख्तियारको मुद्दा त्यसको घरको हो र ?’ « Pahilo News
‘को त्यो लोकमान ? आज पनि हाँस्दैथ्यो, अख्तियारको मुद्दा त्यसको घरको हो र ?’
प्रकाशित मिति : 11 July, 2016 9:41 pm
२७ असार । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूसँग नातासम्बन्ध पर्ने भएकाले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नचिन्ने बताएकी छन् । सोमबार साँझ प्रसारित बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुुराकानीमा उनले भनिन्, ‘को हो त्यो लोकमान ? बाजेको नातासम्मको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो । आज पनि भेट भएको थियो, मैले भनिदिएँ । हास्दैथ्यो । अख्यियारले अन्याय गर्यो भने मैले मुद्दा हेर्न नपाउने ? लोकमानको घरको मुद्दा हो र ?’
तीन दशकभन्दा लामो समय वकालत गरेर आठ वर्ष पहिला अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेकी कार्कीले अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नहुलेको बताइन् । एमालेबाट सभासद् भइसकेकी सपना मल्ल प्रधानलाई न्यायाधीश बनाउने कुराको संसदीय समितिमा झैँ बचाउ गर्दै उनले सपना योग्य महिला रहेका, विद्वान भएको र सर्वोच्च अदालतमा महिलाका विषयका सयौँ चर्चित मुद्दा हेरेको बताइन् । सपना एमालेसँग आबद्ध भन्ने कुराको खण्डन गर्दै न्यायाधीशमा सिफारिश भएका प्रकाश राउत कांग्रेस भए पनि कुरा नउठेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रकाश राउत पनि त कांग्रेस हो, शेरबहादुरजीको कार्यकर्ता हो, खोइ उसको कुरा उठेको ?’
सपना एमालेसँग आबद्ध भन्ने कुराको खण्डन गर्दै न्यायाधीशमा सिफारिश भएका प्रकाश राउत कांग्रेस भए पनि कुरा नउठेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रकाश राउत पनि त कांग्रेस हो, शेरबहादुरजीको कार्यकर्ता हो, खोइ उसको कुरा उठेको ?’
माओवादीसँग निकट रहेको भनेर लाग्ने गरेको आरोपबारे प्रधानन्याधीश कार्कीले कडा प्रतिवाद गरिन् । उनको भनाइ थियो, ‘के को माओवादी हुनु ? म न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर कुनै नेताको घरमा गएँ ? म माओवादी होइन, कांग्रेस पनि होइन । म कम्युनिस्ट होइन, डेमोक्र्याट हुँ ।’
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका ११ जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशको नामै लिएर साह्रै असल भएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन् । आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ योग्य न्यायाधीश रहेको भन्दै तिनले अदालतको गरिमा बचाउनेमा शंका नरहेको बताइन् । हरिकृष्ण कार्की पनि योग्य मानिस रहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
०६८ सालमा बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने निर्णय गरेर चर्चामा आएकी कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने अडान दोहोर्याइन् । उनले भनिन्, ‘एक वर्ष छ, भ्रष्टलाई त छोड्दिनँ ।’